डा. बाबुराम भट्टराईको उपचार आजदेखि शुरु हुने, के हो त उनलाई लागेको दुर्लभ रोग ? - Everest Dainik - News from Nepal
डा. बाबुराम भट्टराईको उपचार आजदेखि शुरु हुने, के हो त उनलाई लागेको दुर्लभ रोग ?
नयाँदिल्ली, पूर्व प्रधानमन्त्री तथा जसपा संयोजक बाबुराम भट्टराईको उपचार आजदेखि शुरु हुने भएको छ ।
आइतबारका दिन भट्टराई श्रीमती हिसिला यमी र प्रेस सल्लाहकार विश्वदीप पाण्डेसँगै दिल्ली पुगेका हुन ।
बाबुराम दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा बसेका छन् ।
भट्टराईको सोमबारदेखि दिल्लीको वसन्तकुञ्जस्थित इन्स्टिच्युट अफ लिभर एन्ड बिलिअरी साइसेन्समा उपचार हुने प्रेस सल्लाहकार पाण्डेले जानकारी दिए । सोमबार दिउँसो वरिष्ठ चिकित्सक विक्रम भाटियाले भट्टराईको परीक्षण गर्नेछन् ।
भट्टराईले ललितपुरको निदान अस्पतालमा उपचार गराउँदै आएका थिए । उपचारकै क्रममा न्युरो–इन्डोक्राइनमा ट्युमर पलाएको आशंका गरिएको थियो । नेपालमा त्यो ट्युमर घातक भए÷नभएको नखुलेपछि निदानका डा. नीरज जोशीले नै भट्टराईलाई चाँडै दिल्ली जान सुझाएको पाण्डेले बताए ।
यसैबीच भट्टराईले उपचारका लागि दिल्लीमा आउनुपरेकामा आफू लज्जित र दुःखित रहेको बताएका छन् । ‘नेपाली दूतावासको अतिथि कक्षमा बसेर घोत्लिँदै गर्दा आफू लज्जितरदुःखित भएछु, २१ औं शताब्दीमा शरीरको कुनामा पलाएको ट्युमर सामान्य कि घातक हो छुट्याउन नसकेर विदेशमा छु । सामान्य नागरिकको के होला ?’ उनले ट्वीट गरेका थिए ।
याे पनि पढ्नुस अध्यादेश जारी गर्नु लोकतन्त्रविरूद्ध गम्भीर अपराध, देश थप संकटमा फस्दैछः बाबुराम भट्टराई
के हो बाबुराममा लागेको रोग ?
बाबुराम भट्टराईको शरीरमा न्युरो–इन्डोक्राइनमा ट्युमर देखिएको हो । यो ट्यूमर घातक पनि हुनसक्छ ।
इण्डोक्राइन प्रणाली भनेको हाम्रो शरीरमा हर्मोन उत्पादन गर्ने प्रणाली हो । हर्मोन भनेका एक किसिमका रसायन हुन । जुन यिनै इण्डोक्राइन प्रणालीसँग सम्बन्धित कोषबाट उत्पादन भएर रगतसँगै शरीरका अन्य अङ्गमा पुग्ने गर्दछन् ।
यसरी हर्मोन नै उत्पादन गर्ने कोषिकाहरुको डिएनएमा समस्या आउँदा यसले कोषलाई म्यूटेशन गर्न थालेपछि त्यसले ट्यूमरको रुप लिन जान्छ । यी ट्युमरहरु शरीरको जुनसुकै भागमा पलाउन सक्छन् । तर खासगरी आन्द्रा, आमाशय, पित्तथैली, फोक्सो आदिमा यी देखिनसक्छन् ।
याे पनि पढ्नुस जातीय अाधार प्रदेश बनाउन बाबुरामकाे माग
याे पनि पढ्नुस सरकारमा बस्ने कि छाडने विषयमा समाजवादी पार्टी भित्र चर्काे विवाद
ट्याग्स: डा. बाबुराम भट्टराई